Ugu horeyn, waxaan dhaleecaynayaa weerarka iyo xasuuqa waxashnimadaa ee ay kuwa nabad-diidka ah ku qaadeen xarunta madaxtooyada Soomaaliya.
Kadib, waxaan u tacsiyaynayaa dhamaan qoysaskii iyo eheladii saraakiisaha dowladda iyo dadkii rayidka ahaa ee gacanta ka xaqdaran ku dishay ayagoo goob cibaado ku sugan. Waxaana u rayaynayaa inuu illaahay abaalkooda ka dhigo kuwo janadii ku waara.
Waxaa si gaar ah ii taabatay mar labaadna aan ka tacsiyaynayaa geerida Marxuum Maxamuud Xirsi Cabdille oo si hagar la’aan ah iila shaqeeyay mudaddii aan xilka Ra’iisul Wasaare ee dalka hayay. Maxamuud wuxuu ii ahaa agaasimihii guud ee xafiiska Ra’iisul Wasaraha tan iyo bishii Janaayo 2013.
Ugu dambayntii, waxaan sidoo kale tacsi gaar ah u dirayaa Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed, iyo kuwa AMISOM gaar ahaan Walaalaha Jabuuti iyo Ugandha. Waxaana uga tacsiyeeyay khasaarihii soo gaaray mudadii ay kuwa nabad diidka ah la dagaalamayeen ayaga oo sugaya amniga dalka.